Nhau - Iyo Yekuvandudza Muitiro WePurp Kuumba Zvigadzirwa Mukambani Yedu
Kambani yedu yanga ichikura mupurpu zvigadzirwa zvigadzirwa indasitiri kwemakore matanhatu, panguva yekufambira mberi kukuru kwakaitwa. Kunyanya, zvakatipoteredza zvine hunyanzvi kurongedza zvigadzirwa uye zvinoraswa zvakatipoteredza zvine hushamwari tafura zvave zvichishandiswa zvakanyanya, asi kuchine zvakawanda zvisingakwanisike mukugadzirwa kwemaspuru yakaumbwa zvigadzirwa zvekambani yedu.
(1) Kunyange pulp Kuumbwa zvigadzirwa zvakagadzirwa kwemakore mazhinji, musika wekushandisa chiyero hachina kukwirira, chimwe chezvikonzero zvakakosha ndechekuti mutengo weforoma wakanyanya, vamwe vagadziri mukugadzirwa kweforoma vanozofunga maitiro ekugadzira ine kuita kwakasiyana-siyana kwakanaka, kuwedzera mwero wekushandisa weforoma, kuderedza mutengo. Semuenzaniso, iyo inowanzo shandiswa cored liner, Angle gadhi, bhana, nezvimwewo, nekuti huwandu hwekugadzira, hombe batch, zvichikonzera kushandiswa kwakanyanya kweaya maficha, inoderedza zvakanyanya mutengo wayo, uyo usingawanzo kutariswa nevaChinese vagadziri. Naizvozvo, dhizaini dhizaini uye gadziriro yakakosha budiriro yenongedzo. Mumakore achangopfuura, kambani yedu inoronga zvishoma nezvishoma kuisa mukugadzirwa uye kugadzirwa kweforoma. Tinovimba mumakore anotevera mashoma kuti vabudirire pachedu muforoma kugadzirwa.
(2) Ongororo isina kukwana pamusoro pekugadzirira slurry, inotungamira mukugadzirwa kwepurpiti zvigadzirwa hazvigone kusangana nezvimwe zvakakosha zvemuviri, saka hazvigone kuzadzisa izvo chaizvo zvinodiwa.In kuitira kuti uvandudze mhando yechigadzirwa, fekitori yedu inoshandisa zvakananga pulp yepakutanga senge huni pulp, bamboo pulp, nzimbe pulp, zvichikonzera kukwirira kwemitengo. Naizvozvo, kambani yedu ichasimbisa kutsvagisa nekusimudzira kweguwa zvigadzirwa zvigadzirwa, uye kune imwe nhanho, kuwedzera kudzokorodza uye kushandiswa kwemarara mabhokisi emarara, bepa remarara uye imwe tambo dzechipiri, kuitira kuti uwane iko chaiko kwekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza. .
(3) Nekuda kwechimiro chakaomeswa chemashizha zvigadzirwa zvakagadzirwa kune zvigadzirwa zveindasitiri, hapana chinobudirira post-kurapwa, zvichikonzera kuenzana kudhaya, nyore kuparara, kurasikirwa nevhudzi, fomu imwe uye zvimwe zviitiko mune yakaumbwa pulp zvigadzirwa fekitori kune maindasitiri zvigadzirwa, izvo zvinokanganisa zvakanyanya mashandisiro ayo. Zvinotarisirwa kuti mamiriro anogona kuvandudzwa nekuwedzera inoshanda post-kurapwa maitiro mune ramangwana, kuti iite kushanda kwayo zvakanyanya.
(4) Parizvino, zvigadzirwa zvemuumbi zvinonetsa kushandiswa sechigadziko chemidziyo yakakura saizi, senge firiji, mhepo inodziya uye zvimwe midziyo yemumba inorema. Maitiro ekuvandudza ayo echimakanika simba kuburikidza nesizizi optimization, zvishandiso kugadzirisa, dhizaini dhizaini uye musanganiswa pamwe nezvakatipoteredza zvekuchengetedza zvinhu kusangana nezvinodiwa zvehukuru saizi zvigadzirwa, inova zvakare yakakosha nzira yekuvandudza kweye mapepa-epurasitiki ekuputira zvinhu.
Chikafu Giredhi Kuteedzera Pulp Mabhokisi, Kudhaya Kuputira Pulp Holder, Mhando dzese dzeKudhaya Kuputira Pulp Holder, Akasungwa Pulp Tereyi, Kurumidza Chikafu Packaging Bhokisi, Chikafu Packaging Bhokisi,